जीवन भोगाइले नारीवादी बनायो : कमला भसिन – Shirish News
दक्षिण एसियाका मुलुकमा ‘जेन्डर ट्रेनर’को रूपमा ख्याति कमाएकी कमला भसिनको जन्म २४ अप्रिल १९४६ मा हालको पाकिस्तानको मन्दिबाहुद्दिन जिल्लामा भएको हो । भारत–पाकिस्तान विभाजनपछि उनको परिवार भारत आएसँगै भसिनको मूल कार्यथलो भारत बन्न गयो । उनी झन्डै चार दशकदेखि लैंगिक समानता, गरिबी निवारण र मानवअधिकारको क्षेत्रमा आवाज उठाइरहेकी नारीवादी सामाजिक अभियन्ता हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनसँग आबद्ध भएर सन् १९७६ मा राजस्थान पुगेकी उनी त्यहीँबाट आफूले समाजका वास्तविक समस्या बुझ्न थालेको बताउँछिन् । राजस्थान उनका लागि गरिबी, महिलाहरूको अवस्था तथा सामाजिक तानाबाना बुझ्ने र जीवनको गोरेटो फेर्ने ठाउँ बन्यो । महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने ‘संगत’ संगठनकी संस्थापक रहेकी उनी त्यसैमार्फत सामाजिक मुद्दामा क्रियाशील छिन् । उनका ‘लाफिङ म्याटर्स’, ‘एक्स्प्लोरिङ मस्कुलिनिटी’, ‘बोर्डस एन्ड बाउन्ड्रिज : वुमन इन इन्डियाज् पार्टिसन’ र ‘ह्वाट इज पेट्रियार्क’का साथै चर्चित कवितासंग्रह ‘क्युँ कि मैं लडकी हुँ मुझे पढ्ना हैं’ प्रकाशित छन् । केहीअघि काठमाडौं आउ“दा भसिनसँग नरेश ज्ञवालीले गरेको अन्तर्वार्ता :
सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा महिला हुनुको वास्तविक अर्थ के हो ?
जुनसुकै अर्थमा पनि पितृसत्ता खेल्ने गर्छ, भलै त्यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नै किन नहोस् । पितृसत्ताका कारण महिलाको वास्तविक अर्थ पुरुषभन्दा तल हो । हिन्दूशास्त्रहरूमा भगवान्ले पुरुषलाई सर्वश्रेष्ठ बनाएका हुन् र क्रिस्चियनमा एडम पहिला जन्मे र उनैको करङबाट महिला निस्केका हुन् भनिन्छ भने हामी कस्तो खाले ‘वैज्ञानिक अवधारणा’लाई पछ्याइरहेका छौँ । पितृसत्तामा पुरुषलाई धेरै अधिकार दिइन्छ जस्तै– सम्पत्तिको अधिकार, निर्णयको अधिकार, मानसिकता निर्माणको अधिकार, जसबाट उनीहरू विचारधाराको निर्माण गर्न सक्छन् । त्यसैका आधारमा धर्ममा के ठीक र के बेठीक भन्ने कुराको निर्धारण उनीहरू नै गर्छन् ।
राजनीतिमा पनि उनीहरूले नै माक्र्स, फ्रायड र अम्बेडकरले के भने भनेर भन्छन्, किनभने पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ९५ प्रतिशत उनीहरू नै हुन्छन् । त्यसैले महिला हुनुको अर्थ पुरुषभन्दा तल र पुरुषको सेवाका लागि हो । यही अवधारणालाई हामीले बारम्बार पुनर्निर्माण गरिरहेका हुन्छौँ । उदाहरणका लागि पति अर्थात् मालिक, ‘ओनर’ । ‘हजबेन्ड’ अर्थात् ‘एनिमल हजबेन्ड्री’ । एउटा जंगली पशुलाई तपाईंले आफ्नो नियन्त्रणमा लामो समय राख्नुभयो भने त्यो घरपालुवा हुन्छ भनेजस्तै एउटी महिलालाई पनि तपाईंले तीज, ऋषि पञ्चमी, करवाचौध, भाइटीका आदिमा बाँधेर भात पकाउन, लुगा धुन, चुलोचौको गर्न, बाउको सम्पत्ति नमाग्न लगाइरहनुभयो भने ऊ पनि पितृसत्ताको घरपालुवा हुन्छे ।
समयसँगै यसमा परिवर्तन पनि देखा पर्न थालेको छ । हिजोआज धेरै महिला घरबाहिरको काम गर्न थालेका छन् । नेपालकी एउटी छोरी विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनेकी छिन् । अर्की सपना मल्ल प्रधान सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी छिन् । बिन्दा पाण्डे जस्ता धेरै महिलाहरू आफ्नो अधिकारको पक्षमा बोल्न थालेका छन् । तर, समाजमा रहेको पितृसत्ता उनीहरू जहाँ पुगे पनि उनीहरूको औकात स्मरण गराइरहन चाहन्छ । त्यसैले वर्षमा पाँच–सातपटक पूजाआजा, व्रत गरिराख, यो धर्म हो, हाम्रो संस्कृति हो भन्छ । त्यसैले ऋषि पञ्चमीमा उसलाई शुद्ध गराउन हरेक अंग धुन लगाइन्छ । भन्नुको अर्थ महिलाले आफ्नो वास्तविक औकात भुल्नु हुँदैन भन्ने समाजको पितृसत्तात्मक सोच रहेको हुन्छ । जसरी तिमीलाई तिम्रो सम्पादकले औकातमा रहन सिकाइरहेको हुन्छ । महिलालाई दिइने आशीर्वाद, विधवा हुँदा, राजस्वला हुँदा गरिने व्यवहार आदि कैयौँ सामाजिक मान्यता जसले महिला हुनुको अर्थ के हो भनेर उसलाई पटक–पटक स्मरण गराइरहेका हुन्छन् ।
आधुनिक महिलाको वर्तमान अवस्थामा पछिल्ला केही दशक कस्ता परिवर्तन देखिएका छन्, जसले उनीहरूलाई पहिलेभन्दा भिन्न देखाउँछ ?
मूलतः दुइटा परिवर्तन भएका छन् । पहिलो, हामी प्रगतितर्फ धेरैभन्दा धेरै अघि बढेका छौँ । प्रगतिको मूल कारण हाम्रो संविधान हो, जसले महिला र पुरुष समान हैसियतका हुन् भन्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार घोषणापत्र, जसले सबै मान्छे आ–आफ्नो सम्मान र अधिकारका साथ समान र स्वतन्त्र छन् भन्यो । त्यसैगरी महिलाहरू शिक्षाको क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी ढंगले अघि बढे । हिजोआज विद्यालय र विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट अंक ल्याउनेमा महिला धेरै छन् । उनीहरूले प्रत्येक क्षेत्रमा प्रगति गरेका छन् । दोस्रो, यसका साथसाथै ठूलो धक्का पनि लागेको छ ।
यतिवेला पुँजीवाद र पितृसत्ता एकअर्कामा गाभिन पुगेका छन् । यी दुवैले एकअर्कालाई जोगाउन सहकार्य गरिरहेका छन् । पुँजीवाद र पितृसत्ताले के बुझिसकेका छन् भने पुँजीवादलाई पितृसत्ताले बलियो बनाउन सक्छ र पितृसत्तालाई पुँजीवादले बलियो बनाउन सक्छ । त्यसैको प्रभाव हो कि हिजोआज कुलीन महिलाहरू तिजको कार्यक्रम पाँचतारे होटेलमा गर्न रुचाउँछन् । ‘प्रोनोग्राफी’, महिला बेचबिखन, सौन्दर्य प्रसाधन आज अर्ब डलरको व्यापार हो । यी कुरा आजभन्दा तीन दशकअघिसम्म थिएनन् । यसले महिलालाई मानिसको रूपमा होइन कि वस्तुको रूपमा हेर्छ र त्यसका उपभोक्ता निर्माण गर्छ ।
भारतले खुला अर्थतन्त्रको नीति अँगालेसँगै चार भारतीय महिला एक्कासि ‘मिस वल्र्ड’ र ‘मिस युनिभर्स’ भए । जबकि त्यसअघिसम्म भारतीय महिलाले त्यो सफलता पाएका थिएनन् । भन्नुको अर्थ, यी सबै आर्थिक निर्णय थिए, जुन व्यापारसँग गासिन्छन् । यसको वास्तविक सुन्दरतासँग कुनै नाता–सम्बन्ध नै थिएन । मलाई अझै पनि सम्झना छ, जतिवेला सुस्मिता सेन सुन्दरी प्रतियोगिता जितेर आइन्, उनलाई राष्ट्रपतिको बग्गीमा राजपथमा डुलाइयो ।
उनलाई राष्ट्रपतिको बग्गीमा डुलाउनुको कारण उनको छाती, नितम्ब ठूला र आकर्षक थिए, कम्मर छिनेको छ, यिनी राम्री हुन् भनेर कसैले भनिदिएको थियो । योभन्दाबाहेक उनमा के थियो र ? अरुणा राय जसले सूचनाको अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याइन्, उनी ‘ब्युटी क्विन’ होइनन् ? वन्दना शिवा, गायत्री स्पिभाक र कमला भसिन पनि ‘ब्युटी क्विन’ होइनन् ? सुस्मितालाई सम्मान गरेसँगै राज्यले सौन्दर्य प्रसाधन कम्पनीहरूलाई सहयोग ग-यो । किनभने सुन्दरी प्रतियोगिता गर्ने त तिनै सौन्दर्य प्रसाधन कम्पनी हुन् ।
यसैमा अर्को एउटा पक्ष जोडिन्छ, सञ्चार माध्यम । आज पनि सञ्चार माध्यमको १० प्रतिशत सामग्री महिलाका पक्षमा हुन्छन् । निर्मला पन्तको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिन्छ, तर विज्ञापन त्यसविरुद्धको प्रकाशित हुन्छ । पछिल्लो समयमा सिनेमा उद्योग जसरी अघि बढेको छ, त्यसमा जम्मा २–३ प्रतिशत राम्रा सिनेमा निर्माण हुन्छन्, नभए अरू त ‘मैं तो तन्दुरी मुर्गी हुँ’, ‘लौंन्डिया पटाएगें मिस कल से’, ‘सिला की जवानी’, ‘मुन्नी बदनाम हुई’ जस्ता लाजमर्दा कुरा सिनेमाले बेचिरहेका हुन्छन् । यिनले पुरुषलाई बलशाली र महिलालाई वस्तुका रूपमा प्रयोग गर्न सिकाउँछन् ।
‘बक्तमिज दिल बक्तमिज दिल माने ना माने ना’ भनेर नराम्रो कुरालाई महिमामण्डन गरिएको छ । प्रहरी कार्यालयमा रक्सीको बोतल लिएर नाच्ने प्रहरीलाई महिमामण्डन गरिएको हुन्छ । हालै एउटा रिपोर्ट आएको छ, इंग्ल्यान्डको फुटबल टिम हारेको दिन खेलाडीहरूले आफ्ना पत्नीलाई कुट्ने गर्छन् । मानिलिनुस् त्यो रिस अन्यत्र देखाउनै हुँदैन र पत्नीलाई कुट्ने उनीहरूलाई अधिकार प्राप्त छ ।
यस्ता प्रकारका हिंसाका रूपहरू हाम्रो समाज र विश्वमा देखापरेका छन् जुन केही दशक अघिसम्म थिएनन् । यसमा लाजमर्दो कुरा त के छ भने समाजमा यस्ता कुरा भइरहेका छन् र यसविरुद्ध कुनै पनि पुरुषले बोलेको मैले सुनेकी छैन । के पुरुषहरूले यस्ता गीतले पुरुषकै बेइज्जती ग¥यो भनेर भन्न सक्दैनन् ? गीत के भन्छ भने– ‘मैं तो तन्दुरी मुर्गी हुँ यार गटकाले सैंया अल्कोहल से’ भनेपछि त्यो पुरुष कति क्रूर व्यक्ति होला कि उसले महिलालाई खाने गर्छ र ‘अल्कोहल’ले त्यसलाई निल्छ । ‘लौंन्डिया पटाएगें मिस कल से’ भन्नुको अर्थ जुन महिलासँग उसले प्रेमको नाटक गरिरहेको छ, त्यो उसका लागि प्रेमिका होइन ‘लौंन्डिया’ हो अर्थात् वेश्या ।
यसमा कुनै पुरुषले बोल्नु पर्दैन कि यो पुरुषहरूको आम चरित्रभन्दा घिनलाग्दो भयो । यस्ता गीतका कारण महिलाहरू डराउने गर्छन् र विश्वास नै गर्दैनन् । जबकि हामी त्यति डरलाग्दा र अविश्वासिला छैनौँ । त्यसैले पितृसत्ताले हामी सबैलाई अमानवीय बनाउँदै लगेको छ । यही कारण हो कि कुनै पुरुषमा महिलाले साथी, प्रेमी अथवा विश्वासयोग्य मानिस होइन कि दुस्मन र सिकारी देख्छे । मलाई के लाग्छ भने हामी कुनै कोणमा अघि बढ्दै छौँ भने कुनै कोणमा पछि सर्दै छौँ । त्यसैले जबसम्म यो आर्थिक व्यवस्थालाई हामीले मेट्न सक्दैनौँ, तबसम्म न त महिला–पुरुषमा, न त दलित–ब्राह्मणमा, न त धनी–गरिबमा समानता आउन सक्छ । यसप्रकारको साम्राज्यवादी पुँजीवादले हरेक प्रकारको असमानतालाई बढाएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाको मूल कारक उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा निहित रहेको बताइन्छ । आर्थिक अवस्था वास्तवमै त्यति नै महत्वपूर्ण कारक हो अथवा हिंसाका पछाडि अन्य आयाम पनि जोडिन्छन् ?
अर्थतन्त्रमा महिलाको पहुँच हुनु महत्वपूर्ण हो । पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार कायम गरिनुपर्छ । प्रोफेसर डिना अग्रवालले केरलामा अनुसन्धान गर्दा के पत्ता लाग्यो भने जुन महिलासँग अलिकति पनि सम्पत्ति छ, उनीहरूमध्ये ६ प्रतिशतमाथि हिंसा भइरहेको छ तर जोसँग अलिकति पनि सम्पत्ति छैन, उनीहरूमध्ये ४७ प्रतिशतमाथि हिंसा भइरहेको छ । त्यसैले हामीले २ वर्षअघि ‘वन विलियन राइजिङ’सँग जोडेर‘सम्पत्ति महिलाको पनि’भन्ने नारा बनायौँ । हिजोआज मलाई के लाग्न थालेको छ भने हामीले हाम्रो अधिकारको कुरा गरेर मात्र हुँदो रहेनछ किनभने अधिकार त हामीसँग पहिलेदेखि नै छ, तर व्यवहारमा त्यो छैन, जुन हुनुपर्ने हो ।
अधिकारको कुरा गर्ने हो भने त हामीमाथि बलात्कार नहुनुपर्ने हो । त्यसैले हामीले यो अभियानलाई सांस्कृतिक परिवर्तनसँग जोडेका छौँ । पितृसत्तात्मक सोच आज आफैँमा एउटा प्रणाली बनिसकेको छ । कार्लमाक्र्सले के सोचेका थिए भने यदि निजी सम्पत्तिको अन्त्य गरिदिने हो भने पितृसत्ता गल्र्यामगुर्लुम ढल्छ । त्यसैले उनले अर्थतन्त्र संरचना हो र सोच अधिरचना हो भनेका थिए । तर, रुसमा त्यस्तो भएन, सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरियो ।
मूल संरचना ढालियो तर त्यससँग जोडिएको पितृसत्तात्मक अधिरचना ढलेन । क्रान्तिपछि पनि महिलाहरू घरमा भात पकाएर बस्न बाध्य भए । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सम्पत्तिका साथसाथै सोचलाई धर्मले बल पु¥याइरहेको छ । यस्ता कैयौँ कुरा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतासँग जबर्जस्त गाँसिएका छन् । पहिले सबैजसो चाडबाड प्रकृतिसँग जोडेर बनाइएका थिए, तर आज तिनलाई संस्कृतिको जामा भिराएर धार्मिक बनाइएको छ । जतिवेलासम्म हामीले सांस्कृतिक मान्यतालाई पुनः परिभाषित गर्दैनौँ, त्यससँग जतिवेलासम्म लड्दैनौँ, हामी एउटा खुट्टामा मात्र हिँडेर कहीँ पुग्न सक्दैनौँ । मलाई लाग्छ, महिलाहरू अर्थतन्त्रमा मात्रै बलियो भएर केही फरक पर्दैन । आर्थिक हैसियत फेरिने तर सोच पुरानै रहने हो भने पहिले चौतारोमा ऋषि पञ्चमी मनाउने महिला पाँचतारे होटेलमा ऋषि पञ्चमी मनाउन पुग्छे ।
ऐतिहासिक मिथहरूलाई पस्केर पटक–पटक के भनिन्छ भने हरेक युद्धका पछाडि महिलाको हात हुन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ, वास्तवमै युद्धका पछाडि महिलाहरूको हात हुने गर्छ अथवा सत्ता हत्याउन, विद्यमान सत्तालाई निरन्तरता दिन अथवा आफूलाई चोखो देखाउन यस्तो खाले ‘शासकीय भाष्य’को निर्माण गरिएको हो ?
ती कुन युद्ध थिए, जुन महिलाहरूका लागि लडियो ? बुसले अफगानिस्तान र इराकमा जुन हमला गरे, त्यो महिलाका लागि थियो ? सिरियामा भइरहेको युद्ध महिलाका लागि हो र ? अमेरिकाका स्कुलमा कुनै महिलाले गोली चलाएर यति जना मारे भनेर सुन्नुभएको छ ? यदि तपाईंको हिन्दू मस्तिष्कमा कुरुक्षेत्रको युद्ध सम्झना भइरहेछ भने अर्कै कुरा हो । के ती युद्ध थिए ? त्यसको इतिहास थाहा छ ? ती मिथक/कथा हुन् । मेरो दृष्टिकोणमा महाभारत एउटा कथा हो ।
त्यसैले महिलाका कारण युद्ध हुन्छ भन्नु आफैँमा बकबास हो । मैले थाहा पाएसम्म महिलाहरूले युद्ध नहोस् भनेर प्रयास गरेका छन् । अकबरलाई कुनै महिलाले रक्षाबन्धन बाँधेर अबदेखि युद्ध नगर्नू भनेको हो । तपाईंले भनेका सबै युद्ध साधन–स्रोतका लागि गरिन्छ । इतिहास पल्टाएर हेरे हुन्छ, युद्ध गर्ने सबै पागलहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन र साधन–स्रोतको दोहन गर्न युद्ध गर्छन् । धर्मलाई त्यसमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । जर्ज बुसको युद्ध मुस्लिमविरुद्ध भन्नका लागि हो । वास्तवमा बुसको युद्ध पेट्रोलियम र ग्यासका लागि हो । त्यसैले युद्धको मूल कारण स्रोत–साधन हो ।
स्रोत–साधनमा कब्जा जमाएपछि शक्ति आफैँ आउँछ । शक्तिमा टिसकराख्न दुइटा कुरा महत्वपूर्ण हुन जान्छ– साधन–स्रोतमाथि कब्जा र विचारधारामा नियन्त्रण । एउटा पुरुषले केही नकमाओस् तर उसमा म पुरुष हुँ भन्ने अहंकार हुन्छ किनभने ऊ पितृसत्तात्मक विचारधाराबाट दीक्षित हुन्छ । एउटा बाहुन जति नै गरिब होस् सार्कीले छोएको खाँदिन भन्छ । यी दुवै शक्ति एक–आपसमा जोडिएर महिलामाथि दमन गर्छन् । त्यसैले हामी दुवै खुट्टामा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई फेर्नु र अर्थतन्त्रको हिसाबले सबल हुनु ।
दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा महिलाको अवस्था विशिष्ट प्रकृतिको छ, त्यसमा पनि दलित महिलाको अवस्था झनै विशिष्ट प्रकृतिको छ । विद्यमान विभेदजन्य समस्याको समाधानमा हामीले के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
दक्षिण एसियाको समाज अफ्रिकी समाजभन्दा पनि निम्नस्तरको छ । भारतमा सबा ६ करोड महिला पछिल्लो ५० वर्षमा कुनै न कुनै कारणले मारिएका छन् । यस्तो अवस्था सबैतिर छ । नेपाल पनि यस्ता कुरीतिको गढ हो । आजको युगमा पनि छाउपडी, गुफा, ऋषि पञ्चमी यो भद्दा र निकृष्ट लाग्दैन ? महिला अशुद्ध भएर उसको शुद्धताका लागि गरेको रे । त्यसो भए एउटा मात्रै मान्छे देखाइदिनुस्, जो अशुद्ध रगत नलागी जन्मेको होस् । क्रिस्चियनहरूको पोप पनि कहाँबाट जन्मेको हो ? रुखबाट जन्मेको हो र ? सबै यही ‘अपवित्र’ रगतबाट जन्मेका हुन् अनि आफू शुद्ध महिला अशुद्ध ? अशुद्ध रगतबाट छोरा जन्मिए शुद्ध, छोरी जन्मिए अशुद्ध पनि हुन्छ ?
त्यसैले मैले यसलाई खुनहरामी भन्ने गरेकी छु । एउटा नमकहरामी हुन्छ, अर्को खुनहरामी । बितेको ४२ वर्षसम्म मैले नेपालमा एउटी पनि त्यस्ती महिला भेटेकी छैन, जसले मैले बार्नु परेन भनेकी होस् । कम्युनिस्ट पार्टीका ठूला–ठूला नेता बनेर हिँडेका छन्, तर यो गलत हो भनेर तिनले आफ्नो परिवारमा पनि यो कुरीतिलाई किन हटाउन नसकेका ? मलाई लाग्छ, दक्षिण एसियामा जात प्रणाली र पितृसत्ता गाँसिएका छन् । अमेरिकामा नश्ल र पितृसत्ता गाँसिएका छन् । समग्र विश्वमा वर्ग र पितृसत्ता गाँसिएको छ । त्यसैले दक्षिण एसियामा सबैको बिहे आफ्नै जातमा हुन्छ ।
वैश्विक रूपमा जसरी अनुदारवादी राजनीति फस्टाउँदै गइरहेको छ, त्यस परिप्रेक्षमा तपाईंहरूजस्ता सामाजिक मुद्दा उठाउनेहरूमाथि त्यसको कत्तिको असर परेको छ ?
यो हामीमाथिको सोझो हमला हो । डोनाल्ड ट्रम्पजस्तो व्यक्ति अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनिनु सोझै महिलामाथि हमला हो । ट्रम्प आएसँगै के भन्छन् भने परिवार नियोजन र गर्भपतन गर्न पाइनेछैन । जहाँ–जहाँ दक्षिणपन्थको राजनीति फस्टाउँदै छ, जहाँ–जहाँ फासीवाद आइरहेको छ, त्यो सोझै हामीमाथिको हमला हो र त्यही दक्षिणपन्थलाई रोक्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
पुँजीवादी नारीवाद र माक्र्सवादी नारीवादबीच के अन्तर पाउनुहुन्छ ?
बिल्कुल सही प्रश्न सोध्नुभयो, नारीवाद एउटा मात्रै छैन । जसरी माक्र्सवाद एउटै छैन । हिन्दू, इस्लाम र इसाई एउटै छैनन् । यसको अर्थ हो कि सबै नारी पनि एक छैनन् । एकातर्फ मजस्तै उच्च जात, उच्च वर्गकी हिन्दू नारी छ, अर्कोतर्फ आदिवासी, गरिब, अनपढ नारी छ, उसमा र ममा के समानता छ ? हाम्रो शरीर मात्रै मिल्छ । हुन सक्छ ऊ मेरो घरमा काम गर्ने महिला हो । त्यहाँ दिदी–बहिनीको सम्बन्ध कहाँ छ ? भन्नुको अर्थ हामी सबै भिन्नाभिन्नै स्थितिका हौँ र हामी सबै विभाजित छौँ । अर्को हाम्रो वैचारिक स्थिति पनि भिन्न–भिन्न छ । केही महिला स्त्री–पुरुष समानताको कुरा गर्नेबित्तिकै स्त्री–पुरुष मात्रैको समानताको कुरा गर्छन् ।
अमेरिकामा नश्लीय विभेद छ, एउटी अश्वेत महिला अश्वेत भएकै कारणले हेपिएकी छ, एउटी भारतकी दलित महिला अथवा आदिवासी महिला दलित र आदिवासी भएकै कारण हेपिएकी छ भने त्यो मेरो मुद्दा होइन भन्ने नारिवादी पनि छन् । अनि कुनै अश्वेत, दलित अथवा आदिवासी महिलाले पहिले मेरो र तिम्रो बीचको यो असमानता त हटाऊ, जुन मभन्दा भिन्न भएका कारणले तिमीले ममाथि शासन गरेकी छौ अनि महिलाको मुद्दामा फेरि हामीसँगै होउला भनी भने कोही नबोल्ने छन्, कोही यसमा बोल्ने छन् । म यी दुवै समस्यालाई सँगै लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । म के ठान्छु भने दक्षिण एसियामा जति पनि नारिवादी छौँ, हामी सबैजसो कम्तीमा सबैले सबै मुद्दा लिएर अघि बढेका छौँ । बितेका १० वर्षयता हामीले दलितको कुरा गरिरहेका छौँ । अब हामी शारीरिक रूपले सांग नभएकाहरूको पनि कुरा गरिरहेका छौँ र उनीहरूका लागि लडिरहेका छौँ ।
तपाईं पहिले ‘हार्ड लाइनर फेमिनिस्ट’ भनेर चिनिनुहुन्थ्यो । पछिल्ला केही वर्षमा तपाईं ‘नरम’ हुँदै जानुभयो भन्ने गरिन्छ । तपाईंमा यो परिवर्तन कसरी आयो ?
म ‘हार्ड लाइनर’ थिएँ भनेर मलाई कहिल्यै थाहा छैन । सन् १९७० मा म जर्मनीमा पढेर आएँ । त्यसपछि म विकास र गरिबीको क्षेत्रमा काम गर्न राजस्थान पुगेँ । मैले पहिले सहभागिता जनाएको संस्था महिला संस्था होइन । राजस्थानको उदयपुरमा मैले दलित र आदिवासी समुदायसँग काम गरेपछि बल्ल थाहा पाएँ, हाम्रो समाजमा गरिबीको के अर्थ छ र जात व्यवस्थाले तिनलाई कसरी थिचेर राखेको छ । जुन कुरा मैले त्यहाँ सिक्दै थिएँ, त्यो मैले न त जर्मन विश्वविद्यालयमा पढेकी थिएँ, न राजस्थान विश्वविद्यालयमा । आजसम्म मैले जे कुरा सिकेकी छु त्यो गरिब आदिवासी दलितहरूसँग सिकेकी हुँ । पितृसत्ता भन्ने सुनेकी थिएँ, त्यहाँ गएपछि बल्ल महसुस भयो, यो कति खतरनाक हुन्छ । हो, सानैदेखि अलिक नारिवादी थिएँ होला ।
तर त्यो कुनै वैचारिक स्तरमा थिएन । जीवन भोगाईले मलाई नारीवादी बनायो । बिस्तारै–बिस्तारै म नारीवादी बनेँ । गरिब समुदायमा काम गर्दै गर्दा बल्ल मलाई थाहा भयो, गरिबमा महिला धेरै गरिब छन् । दलितमा महिला धेरै दलित छन् । अश्वेतमा महिला अझै धेरै अश्वेत छन् । यो सबै कुरा आफ्नै आँखाअगाडि देखेपछि जवानीमा अलिक रिस उठ्यो होला । साथै के पनि देख्न थालेँ भने यो लडाइँ निकै लामो छ । कुरा बुझ्दै जाँदा परिपक्व हुन थालेँ होला । तर, मैले पुरुषलाई कहिल्यै पनि आफ्नो दुस्मन ठानिनँ । बिहे पुरुषसँगै गरेँ । भाइहरूलाई अहिले पनि असाध्यै माया गर्छु । त्यसैले सधैँ के भनेँ भने महिला अधिकारको लडाइँ पुरुष र स्त्रीबीचको लडाइँ हुँदै होइन । यो लडाइँ दुई विचारधाराबीचको हो । एकातर्फ पितृसत्ता ठीक हो भन्ने छन्, अर्कोतर्फ होइन समानता ठीक हो भन्ने छन् । दुवैतर्फ महिला–पुरुष उत्तिकै छन् । त्यसैले पुरुष पनि नारीवादी हुन सक्छन् ।-नयाँ पत्रिकाबाट
राष्ट्रिय एकताले मात्र मधेसको विकास हुने :अध्यक्ष प्रचण्ड ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )